‘पपुलारिटी’मा ओलीलाई उछिन्ने देउवा सरकारको बजेट
कामठाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा पेश गरेकाे संशोधन बजेट (बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक)का कार्यक्रम र तथ्यांकहरु हेर्दा स्पष्ट भइन्छ– ‘पपुलारिटी’मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे याे गठबन्धन सरकार केपी ओलीकाे अघिल्लाे सरकारलाई उछिन्न चाहन्छ । त्यो पनि बजेट मार्फत्, नगद वितरण र पूरा नहुने घाेषणा मार्फत् ।
आगामी चुनावलाई समेत लक्षित गरेर सरकाले लोकप्रियता आर्जन गर्न सामाजिक सुरक्षातर्फ अझ बढी वर्गमा पुग्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ । अन्य तथ्यांक, कार्यक्रम र सूचक पनि लोकप्रियता उन्मुख नै देखिन्छन् ।
यस्ता छन् ‘पपुलारिटी’ आर्जन गर्न संशाेधन बजेटमा ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम तथा सुविधा
सहरी विपन्न नागरिकलाई काठमाडौँका १० स्थानमा दैनिक खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाउने
मिर्गौला रोग, क्यान्सर र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने
‘राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने’का परिवारलाई मासिक ३ हजार
५ लाख गरीब परिवारलाई १० हजार नगद अनुदान दिने
बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेर बचत हुन जाने ५ अर्ब कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने
मेलम्ची खानेपानी आयोजना चैतभित्रै सुचारु गर्ने
पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्‍याउने
वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न विनाधितो ऋण दिइने र ब्याज अनुदान दिइने
२०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने
२०७८ मा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिव रू. ३७ अर्ब घटाएको र यसबाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभार सानो अंशमा भएपनि कम हुन जाने।
२०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने
अघिल्लाे बजेटकाे भन्दा के फरक छ तथ्यांक र लक्ष्य ?
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य । विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले ०.५ प्रतिशत विन्दुले बढी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन् ।
बजेटको आकार १५ अर्बले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब कायम गरेका छन् । अघिल्लो बजेट १६ खर्ब ४७ अर्बको थियो ।
चालु खर्चको लक्ष्य १ अर्बले घटाएर ६ खर्ब ७७ अर्ब कायम गरेका छन् ।
पूँजीगत खर्चको लक्ष्य ४ अर्बले बढाएर ३ खर्ब ७८ अर्ब पुर्याएका छन् ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य २६ अर्बले बढाएका छन् । विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा जनादर्शन शर्माले १० खर्ब ५० अर्बको लक्ष्य राखेका छन् ।
वैदेशिक अनुदान बापत प्राप्त हुने रकमको लक्ष्य भने ४ अर्बले घटाएर ५९ अर्ब कायम गरेका छन् ।
वैदेशिक ऋण र आन्तरिक गरी ऋण लिने लक्ष्य ३८ अर्बले कम गरेका छन् ।
हुन सक्ला पूर्ण कार्यान्वयन ?
सरकारले बजेटमार्फत लोप्रिय हुन खोजेको त प्रस्ट पारेको छ । तर, यो बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन आगामी अझै १० महिना कुर्नु पर्छ । कागजी बक्तव्य र घोषणा जस्तै अक्षरशः कार्यान्वयन भए साँचै बजेट केही वितरणमुखी तथा केही कार्यकर्ता खुसी पार्न खोजिएको देखिए पनि समग्रमा आर्थिक विकासमा प्रभाव दिने किसिमकै छ ।
यद्पी नेपालमा हालसम्मका कुनै पनि बजेटका सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा लक्ष्य अक्षरशः वा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएकाे रेकर्ड छैन । पूँजीगत खर्च त झनै सबै कार्यान्वयन हुन सकेकाे छैन । सामाजिक उत्तरदायित्वका कतिपय प्रतिवद्धता र निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्रलार्इ दिने भनिएकाे छुट सुविधाकाे कार्यान्वयन भएकाे छैन ।
यस्ताे अवस्थामा सरकारले सामाजिक तथा छुट सुविधाका थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी ल्याएकाे बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्ने अाधार देखिएका छैनन् । याे बजेट कार्यान्वयन गरिसक्क जम्मा जम्मी १० महिना समय छ । त्याे पनि चाडपर्व बिदालार्इ घटाउने हाे भने समय अझै कम छ ।
घाेषणा गरेका कार्यक्रम तथा सुविधा कार्यान्वयन भएन भने चाहिँ सत्ता गठबन्धनको लोकप्रियताका लागि र आगामी चुनावमा जनताको मन र भाेट जित्न ल्याएको मात्रै ठहर्छ ।